Ismariwaa ka taagan wadahadalkii Trump iyo Zelensky
Qareenka u doodaya shakhsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka, ayaa sheegaya in shakhsigaasi uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su’aalo qoraal ah oo ay qabaan xubnaha Aqalka Hoose ee xisbiga Jamhuuriga.
Qareenka oo lagu magacaabo Mark Zaed ayaa boggiisa Twitterka ku qoray Axadii in ay ka aqbali doonaan in xubnaha Jamhuuriga ee uu hogaamiya Devin Nunes ay soo gudbiyaan su’aalo qoraal ah taasi oo uu qofka sirta dusiyey uga jawaabi si qoraal ah.
Waxa uu qareenku intaa ku daray in qofkaasi su’aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu/ay sheegto aqoonsigiisa/geeda.
Jim Jordan oo ah xubin sare oo ka tirsan xubnaha koongareeska ee Jamhuuriga ayaa diiday soo jeedintan ka timid kooxda sharciga ee qofka soo shaacbixiyey wadahadalka labada madaxweyne. Jordan ayaa sheegay in jawaabo qoraal ahi aanay ku filneyn in kiiska si wanaagsan wax looga weydiiyo oo lagu baadho. Wuxuu ku eedeeyey in qofka sirta dusiyey uu shaqadiisa ku milay siyaasad.
Hase yeeshee Zaid ayaa eedeyntaasi ka jawaabay isaga oo sheegay in qoraalka Jim Jordan uu muujinayo in xildhibaanku uu “si khaldan” u fahmay sharciga federaaliga ah ee ilaaliya aqoonsiga iyo shaqada dadka soo sheega masuuliyiinta ku kaca denbiyo xeeraka dalka aan waafaqsaneyn, ku xadgudubka awooda xafiiska iyo ilaalinta khatarta ku iman karta shaqaalaha dowladda.
Iyadoo ay shuruucdani diidayaan shaacinta aqqoonsiga qofka wax dusiya, ayuu Axaddii Madaxweyne Trump markale codsaday in magaca shakhsigan la baahiyo.